I-Beijing Duomilai igqwetha umboniso WOKUGQIBELA eSydney, eOstreliya
UKUZIPHATHA kwathatha inxaxheba kumdlalo we-N980 weNRA eSydney, eOstreliya
Izitayile zodidi kunye nefashoni zitsala abathengi abaninzi beze kusityelela kwaye bathethe malunga nentsebenziswano. Phantse zonke iindwendwe zivela e-Oceania kunye nakumazwe asempuma mpuma Asia kwaye zonke iindwendwe zinomdla kwiimveliso zethu. Abanye abathengi bafuna ukuba ngumhambisi njengoko becinga ukuba iimveliso zineemarike ezilungele.
Umsebenzi olungileyo kunye neemveliso zeprimiyamu esemgangathweni unokuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya. Ilaphu esilisebenzisayo lenziwe ngekonkile yeXinjiang Aksu eneempawu ezingafaniyoyo nanjengepilisi, akukho-fiphu, akukho zithwala, ubomi benkonzo ngamaxesha ama-2 engubo eqhelekileyo yokupheka, zonke i-CHECKEDUT chef zangaphantsi ziya kuhlanjwa ngaphezulu kwamaxesha angama-200 . Kungenxa yoko le nto siyibiza ngokuba yingubo yokupheka engasasebenziyo.
Ngomdlalo, sidibene nabathengi abohlukeneyo abavela kumazwe angama-22 ahlukileyo kunye neendwendwe ezingama-250 bafumana izimvo zabo malunga nohlobo lwengubo yechephe kunye neeapile abafuna ukuyenzela abasebenzi babo abapheki.
Izinto ezibonisiweyo zithengisiwe ngexesha lomdlalo, ezinye iimpahla ze-chef zithengwe ngumpheki, ezinye zithengwe sisikolo esili-cala kwaye ezinye zithengwe yinkampani eliqela njengeesampulu into abafuna ukuyenza kukuxoxa neqela labo emva koko baqhubele phambili malunga nentsebenziswano.